SAWIRRO: Warbixin ku saabsan Donald Trump oo la shaaciyay inuu asal ahaan ka soo jeedo Jarmalka! | Allsomali24.com
SAWIRRO: Warbixin ku saabsan Donald Trump oo la shaaciyay inuu asal ahaan ka soo jeedo Jarmalka!	Added by Abdifatah Adde on Nov 22, 2016.Saved under OPINION, SOMALI NEWS, WHAT'S NEW?Tags: Abdifatah Adde, Bavaria, Donald Trump, Friedrich Trump, Germany, Kallstadt	Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa la sheegay in asalkiisa uu ka soo jeedo dalka Jarmalka, kaddib markii la helay Awoowgiis magaaladuu ka degnaa Jarmalka sanadkii 1885-kii.
Wargeyska lagu magacaabo BILD ee ka soo baxa dalka Jarmalka, ayaa shaaca ka qaaday, in Donald Trump, Awoowgiisa, uu dalkani Jarmalka ku soo laabtay, isaga iyo Xaaskiisa, bilowga qarnigii 20-aad, ka hor inta uusan dhalan wiilkoodii ugu horreeyay.
Madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka, Donald Trump, Awoowgiisa oo lagu magacaabo Friedrich Trump ayaa dalkani Jarmalka ka tagay, isagoo 16 sano jir ah, wuxuuna noloshiisa ka billaabay magaalada New York ee waddanka Mareykanka, taariikhdu markay aheyd 1885-kii.
Waxaana la sheegay in uu halkaasi ka sameystay Maqaayad iyo Baar habeenkii lagu caweeyo, isagoona sidaasi ku noqday nin maal-qabeen ah.
Maal-qabeen Friedrich Trump, ayaa sanadkii 1901-dii kaligiis ku soo noqday magaaladii uu ku dhashay ee Kallstadt oo ku taalla koonfur galbeed gobolka Bavaria ee Jarmalka.
Wuxuuna isla sanadkaasi magaalada Kallstadt ku guursaday haweeney magaceeda la yiraado Elisabeth Christ, wuxuuna dib ugu laabtay isaga oo ay la socoto Xaaskiisa waddanka Mareykanka.
Awoowga Donald Trump, ayaa mar kale dib ugu soo noqday magaaladiisa Kallstadt, iyadoo ay la socoto Xaaskiisa Elisabeth Christ, laakiinse waxaa lagu xukumay inuu dalka ka baxo ama lamusaafurin doono, haddii uu ku dacwoon waayo dhalashadiisii Jarmalka aheyd.
Ronald Paul, waa qoraa weyn dhinaca taariikhaha, wuxuuna sheegay, in intaasi kaddib laga xayiray dhalashadiisii Jarmalka, sanadka markuu ahaa 1905-tii, iyadoona mas’uuliyiinta gobolka Bavaria ku tilmaameen Friedrich Trump nin qabyo ah. boqortooyada Bavaria waxay sheegtay in la musaafurinayo.
Qoraaga oo hadalkiisa sii wata, ayaa waxa uu sheegay in la hayo waraaqihii uu ka codsaday Friedrich Trump dhanka Maxkamadda oo aheyd in loo daayo magaaladiisa Kallstadt, balse waa laga diiday codsigiisii.
Intaasi kaddib Awoowga madaxweynaha la doortay Donald Trump si kama dambeys ah, wuxuu dib ugu noqday magaalada New York ee dalka Mareykanka isla sanadkii 1905-tii, halkaasi oo uu noloshiisa ku qaatay.
Wargeys-ka BILD, ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in warqadaha la helay ay ku qornaayeen, in Xaaska Friedrich Trump ay laheyd saddex bilood oo uur ah. waxayna magaalada New Yor ku dhashay Fred Trump oo ah Aabaha dhalay madaxweynaha cusub ee iminka loo doortay dalka Mareykanka Mr. Donald Trump.
Wargeyska ayaa si cad u qaaxey in madaxweynaha la doortay ee Donald Trump asal ahaan uu ka soo jeedo koonfurta dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Kallstadt ee gobolka Bavaria oo ah halka uu ku dhashay Awoowgiis Friedrich Trump.
Xigasho Wargeyska – BILD.de
Waxaa turjumay Weriye Abdifatah Hassan Mohamed (Abdifatah Adde) E-mail: afatah@outlook.de
Verden – Germany ::: Qeybta hoose nagula wadaag Fikirkaada! :::	KU BIIR ASXAABTA FACEBOOK